परिच्छेद–१२ सङ्कल्प – नेपाल कानुन आयोग
78. सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न सकिने :- (१) यस नियमावलीको अधीनमा रही सार्वजनिक महत्वको देहायको कुनै विषयमा सङ्कल्प पेश गर्न सकिनेछ :–
(२) अध्यक्षले उपयुक्त र आवश्यक ठह¥याएको अन्य कुनै विषयमा सङ्कल्प पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
79. सङ्कल्पको सूचना :- (१) सङ्कल्प प्रस्तुतकर्ताले आपूmले पेश गर्न चाहेको सङ्कल्पको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएको सात दिन पछिको बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ ।
तर कुनै मन्त्रीले सूचना दिएको सङ्कल्प तीन दिन पछिको बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ ।
(२) मन्त्री बाहेक अन्य कुनै सदस्यले अध्यक्षको अनुमति नलिई एउटै अधिवेशनमा तीनभन्दा बढी सङ्कल्पको सूचना दिन पाउने छैन ।
80. सङ्कल्प सम्बन्धी शर्त :- यस परिच्छेदमा लेखिएको कुराका अतिरिक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा व्यवस्थित सबै शर्त सङ्कल्पको हकमा पनि लागू हुनेछन् ।
81. स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय :- (१) कुनै सङ्कल्प स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय अध्यक्षले गर्नेछ र कुनै सङ्कल्प वा सङ्कल्पको कुनै अंश संविधान वा यस नियमावलीको विपरित भएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नेछ ।
(२) अध्यक्षबाट बैठकमा पेश गर्न स्वीकृत सङ्कल्पको प्रति सङ्कल्प पेश हुने दुई दिन अगावै संशोधन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
82. सङ्कल्प पेश हुने :- एउटा बैठकमा एक सदस्यको एकभन्दा बढी सङ्कल्प कार्यसूचीमा राखिने छैन र एक बैठकमा दुईभन्दा बढी सङ्कल्प राखिने छैनन् ।
83. सङ्कल्प पेश गर्ने तरिका :- (१) अध्यक्षले नाम लिएपछि सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले बैठकमा आफ्नो सङ्कल्प पेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी सङ्कल्प पेश गर्दा सङ्कल्पको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
तर अध्यक्षको अनुमति लिएर कुनै सदस्यले अन्य ै सदस्यलाई आफ्नो सङ्कल्प पेश गर्न अधिकृत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षले सदस्यको नाम लिएपछि सो सदस्यले सङ्कल्प पेश नगर्ने इच्छा प्रकट गर्न सक्नेछ ।
84. छलफलको समयावधि :- सदस्यले सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दा र सम्बन्धित मन्त्रीले पहिलो पटक बोल्दा अध्यक्षको अनुमतिले बीस मिनेटसम्मको समय पाउनेछ । बोल्न चाहने अन्य सदस्यको समयावधिको निर्धारण अध्यक्षले गर्नेछ । सदस्यले बोलिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछ ।
85. संशोधन सम्बन्धी शर्त :- (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत पेश भएका सङ्कल्पमाथि अध्यक्षको अनुमति लिई संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।
(२) नियम ६९ मा उल्लिखित शर्त सङ्कल्पको संशोधनका हकमा पनि लागू हुनेछन् ।
86. सङ्कल्पमा निर्णय :- छलफल समाप्त भएपछि सङ्कल्प उपर कुनै संशोधन पेश भएको रहेछ भने बैठकले पहिले त्यसको निर्णय गरी सङ्कल्पमा निर्णय गर्नेछ ।
87. स्वीकृत सङ्कल्प पठाइने :- सचिवले बैठकद्वारा स्वीकृत गरिएको प्रत्येक सङ्कल्पको एक–एक प्रति मन्त्रिपरिषद्लाई र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउनेछ । सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
तर कुनै मनासिब कारण परी सङ्कल्प कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा त्यस्तो कारण सहितको जानकारी सभालाई गराउनु पर्नेछ ।
This Month : 20436
Total Users : 709884
Views Today : 15715